प्रभावकारी होला गुगलमा नेपाली अनुवाद? | Bishow Nath Kharel
प्रभावकारी होला गुगलमा नेपाली अनुवाद?
मिति : २०७० पुस १४, आइतबार
इन्टरनेटमा भाषाको समस्या। अंग्रेजीमा अभ्यस्तका लागि त भाषाले अप्ठ्यारो नपार्ला। इन्टरनेटमा अरू भाषा पनि प्रयोग हुन्छन्। अंग्रेजी जान्ने नजान्ने दुवैलाई अरू भाषाका पेजहरू उपयोगी हुँदैनन्।
चर्चित सर्च इन्जिन गुगलले अनुवाद सेवा उपलब्ध गराएपछि अन्य भाषाका सामग्रीलाई पनि आफ्नो भाषामा पढ्न पाइने भयो। त्यसले पनि नेपालीभाषीलाई सजिलो बनाइदिएको थिएन। कारण, गुगल ट्रान्सलेसनबाट हामीले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नसक्ने अवस्था थिएन।
अहिले केही हदसम्म यो समस्याबाट हामी मुक्त भएका छौं। किनभने गुगलले नेपाली भाषामा पनि ट्रान्सलेसनको व्यवस्था गरिदिएको छ।
गुगलले आफ्नो ट्रान्सलेसनमा गरेको विकासले विश्वलाई नै एक सूत्रमा बाँधेको छ। अनुवादको सुविधाले अब विश्वका ८० भन्दा बढी भाषामा लेखिएका कुरालाई हामीले नेपाली भाषामा हेर्न सक्छौं। भर्चुअल वल्र्डमा प्रविधि, साहित्य तथा विचारको क्षेत्रमा जुन विकासको कल्पना गरिएको थियो, अनुवादको कारणले हामी त्यसमा पछि परेका थियौं।
यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भाषा नै थियो। भाषाले गर्दा आफ्ना विचार, सिर्जना र साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउन सकेका थिएनौं। गुगलले नेपालीमा समेत अनुवादको व्यवस्था गरिदिएपछि अब हाम्रा लागि आफ्ना सिर्जनालाई विश्वमा पुर्‍याउन सजिलो भइदिएको छ।
गुगलको ट्रान्सलेट सेवाबाट लगभग सात दर्जन भाषाका सामग्रीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। यसका लागि इन्टरनेट कनेक्सन भएको कम्प्युटर वा मोबाइल भए पुग्छ।
यो सेवा एकदमै सजिलो तरिकाले बनाइएको छ। एकचोटि हेरेपछि तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो सेवाअन्तर्गत अहिलेसम्म ८० वटा भाषालाई एकअर्कामा अनुवाद गर्न सकिन्छ। गुगल ट्रान्सलेसनका लागि ट्रान्सलेट डट गुगल डट कममा जानेबित्तिकै अनुवाद गर्ने बक्स आउँछ। त्यहाँ आफूले अनुवाद गर्नुपर्ने वा पढ्न चाहेको टेक्स्ट टाइप वा पेस्ट गर्नेबित्तिकै यसको अनुवाद पढ्न सकिन्छ।
यसका लागि अनुवाद गर्ने भाषा भने छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुवाद त्यसै पनि जटिल प्रक्रिया हो। अनुदित सामग्री पढ्दा मौलिक सामग्री अध्ययन गरेजस्तो स्वादिलो हुँदैन। भाषाको असली स्वाद खोजेर पढ्ने हो भने गुगल ट्रान्सलेटले सघाउँदैन। फेरि नेपाली अनुवाद प्रारम्भिक चरणमा भएकाले धेरै गल्ती तथा कमजोरी देख्न सकिन्छ। यसलाई सुधार गर्न गुगलले नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाका दक्ष व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवी रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
गुगललाई सहयोग गर्न चाहने स्वयंसेवकले डीओसीएस डट गुगल डट कममा गएर साइनअप गरी सहयोग गर्न सक्छन्। यसमा शुद्ध अनुवादका लागि सहयोग गरेर प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रयोगकर्ताकै हो।
Source : http://www.annapurnapost.com/en/news/specialpage/1850/